Vaovao - Genzon Novel Fitaovana, manatrika ny "2019 Suqian Green Industry Expo"
Genzon Novel Fitaovana, manatrika ny "2019 Suqian Green Industry Expo"
Ny 28 septambra teo, ny hetsika eo an-toerana amin'ny taona Suqian Green Industry Expo, dia nanatanteraka ny fisokafana lehibe tao amin'ny foibe fampirantiana Suqian. Ny lohahevitr'ity Green Fair ity dia "maintso, fampidirana ary mitsambikimbikina", mifantoka amin'ny indostrian'ny maitso sy ny toekarena ekolojia mba hanatanterahana ny fifampiraharahana ara-toekarena sy varotra, hampiroborobo ny fampidirana ny fanavaozana ara-tsiansa sy teknolojia sy fampandrosoana ara-indostrialy, ary hanangona fotoana vaovao ny maitso. fampandrosoana leapfrog
Genzon Novel Material, toy ny orinasam-barotra malaza eto an-toerana, nitondra ny vokatra haitao mandroso ho an'ny fampirantiana. Genzon Novel Materials koa dia nampiseho ny andian-tsarimihetsika lehibe indrindra: Film base film, film base card, Rosiana base de film, film base protection, film base Bronzing, Transfer base film, ary Lurex thread base film, Tangle film. Ilay fijoroana dia nanintona ireo manam-pahaizana momba ny indostria sy olona liana.
2019 Eksaody indostria maintso Suqian no hetsika lehibe indrindra ary manan-kery indrindra any Suqian, tsy vitan'ny sehatra manan-danja ihany hanamafisana ny toekarena, fifanakalozana fifanakalozana ary fiaraha-miasa indostrialy, fa izy ihany koa no sehatra fampielezana marika mety. Genzon Novel Bahan manatrika io hetsika io, tsy vitan'ny fanatsarana ny lazan'ny ivelany ihany, fa mampivoatra ny fanentanan'ny marika koa.